Vedare Case Vagadziri & Vanotengesa - China Classic Nyaya Nyaya
Vibrating Knife Kutema Muchina
WDC-LXSHOW CCD LXZ1625-C
Internet Laser Cutting Machine
Metal Plate Fiber Laser Kutema Machine
Metal Tube Uye Plate Fiber Laser Kucheka Machine
Njere Vibrating cnc Machine
UV Chichatara Machines
CO2 Chichatara Machine
Green Light Chichatara Machine
Dzidza More Fiber Laser Cutting
Dzidza More Vibrating Knife
Dzidza More Laser Chichatara
Dzidza More Plasma Cutting
Dzidza More Laser Welding
Dzidza More Laser Cleaning
Middle Kutengesa Service
Pashure Sales Solution Vedio
Development Course Yekambani
Hofisi Uye Fekitori
LXSHOW Laser Nhau
na admin on 20-05-14
Laser kuvharika ndeye nyowani yekugadziriswa kwemuchina technology. It inowedzera cladding zvinhu pamusoro pemvura substrate uye anoshandisa mukuru-simba arambe achirema Laser danda kubatanidza pamwe nhete rukoko pamusoro pemvura zvinhu iumbe chirungiso cladding rukoko pamwe simbi pamusoro pemvura. ...
Laser kuchenesa pamusoro coating uye kufembera usati wabika
aser kuchenesa welding nzvimbo uye oxide layer
Lingxiu laser kuchenesa inobvisa zvinowedzera, zvinoshatisa uye zvisingaitisi tsvina yesimbi pane isimbi, zvekuti mhando yehuturu uye yekutsvaga maputi yakakwira, uye marata anoonekwa mushure mekunge nzvimbo yekudira yacheneswa. Welding nzvimbo dzesimbi uye aluminium dzinogona kucheneswa kumberi mushure mekutambisa. Ini ...
Laser yekuchenesa mafuta banga (kunze kwependi)
Laser ngura kubviswa
Inogona kucheneswa nekukasira, zvakachena uye zvakaringana kubvisa kumusoro kutu Zvinotakurika ngura kubviswa muchina michina kugadzirisa haina kukuvadza substrate; Inogona kushandiswa kwenguva yakareba nemari yakaderera yekushandisa; Izvo zvigadzirwa zvinogona kuziva otomatiki mashandiro uye mashoma mashandiro; Kwemamiriro ekunze ...
Laser kuchenesa rabha tireya tire
Kana dambudziko rekuchenesa maturu rakaumba, Lingxiu laser yatove neyese yakazara yekugadzirisa uye nekukurumidza mhinduro-kubva kubeche ruoko kusvika azere otomatiki laser kuchenesa masisitimu. Cheneswa nzvimbo dzakaomarara. Iyo yega yega laser yekuchenesa system inogona kuchenesa nhamba huru yezvikamu zvekuumbwa nenzira kwayo, ...
Carbon Fiber Cutting Machine , Internet Laser Cutting Machine, Internet Cutting Machine 500w, Laser Fiber Kucheka Machine,